Victoria Falls, Zimbabwe, 23 October 2017 (ECA) - The proposed Commission of African Registrars General is a welcome development that will ensure the advancement of Africa’s civil registration agenda, Zimbabwe’s Home Affairs Minister, Obert Mpofu, said Friday.
Read more about Zimbabwe Minister hails proposed Commission of African Registrars General
Victoria Falls, Zimbabwe, 19 October 2017 (ECA) - African Registrars General are meeting in Victoria Falls, Zimbabwe, for the first time to deliberate on how to improve civil registration as part of implementing the civil registration and vital statistics process the continent.
Read more about Africa’s vital civil registration systems under spotlight at historic Zimbabwe meeting
Every year, on 18 November, the African statistical community celebrates the African Statistics Day (ASD) with the objective of continuously raising awareness about the importance and use of statistics to support evidence-based decisions to support economic and social development in Africa. We are therefore pleased to inform you that the theme for 2017 African Statistics Day is: “Better Lives with Better Economic Statistics.” This theme was chosen in order to raise the awareness among decision makers, technical and financial partners, data producers, researchers, and the general public.
Read more about Zimbabwe’s Tobaiwa Mudede advocates for African Registrars General Association
Read more about Task force meeting on Committee of African Registrars General set for Victoria Falls
Read more about Schweinfest says reaching out to policymakers on benefits of SDMX crucial
Read more about SDGs offer unique opportunity to expand SDMX reach says UNSD’s Schweinfest
Read more about Time to legislate statistics says South Africa’s Statistician-General at SDMX conference